तीन safest र सबै भन्दा राम्रो आत्म सन्तुलन स्कूटर समीक्षा - Jomo प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
तीन safest र सबै भन्दा राम्रो आत्म सन्तुलन स्कूटर समीक्षा
तिनीहरूले असीमित खुसी प्राप्त किनभने सक्नुहुन्छ र hoverboard चढेर मा आनन्द, तर सुरक्षित आत्म सन्तुलित स्कूटर कसरी चयन गर्न hoverboard, अधिक साना मानिसहरूले स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ? अब मलाई तपाईं तीन safest र सबै भन्दा राम्रो आत्म सन्तुलन स्कूटर सिफारिस गरौं। पहिलो एक छ KOOWHEEL ब्रान्ड स्व शेष बोर्ड K7 उल 2272 प्रमाणीकरण र एलजी स्मार्ट ब्याट्री संग। को2पाङ्ग्रा स्व सन्तुलन स्कूटर K7 ब्लुटुथ दुई Wheeled 8.5inch राम्रो स्व सन्तुलन स्कूटर Hoverboardठोस टायर Hummer- तपाईं राम्रो अनुभव दिन्छ! यो थप शक्तिशाली मोटर्स प्रयोग गर्न अनुमति दिने, अन्य hoverboards भन्दा अलि फरक प्रविधि सुविधाहरू, को 8.5inch पाङ्ग्रा माटो र घाँस मा शानदार तापनि, inflatable हुनुको, तपाईं अझै पनि असमान terrains मा कम्पन धेरै महसुस हुनेछ छन्। पूर्ण दिन वा roving पछि, हामी यस hoverboard एक 15-20km प्राप्त गर्न सक्षम थिए। यसको सबै भन्दा वेग प्रति घण्टा 12km छ। यो संभवतः कुनै पनि सतह मा यात्रा र माथि inclines कारण शक्तिशाली मोटर्स गर्न सक्छन्। अर्को एक ठाउँ बाट सहज तपाईं लिन जादुई क्षमता, पूर्ण जो माथि तपाईं यात्रा तल्ला द्वारा unhindered छ। को hoverboard एकदम केवल आफ्नो आदेशहरू जवाफ र यो बुझ्न लामो लिन गर्दैन।
अर्को शुरू KOOWHEEL आत्म-सन्तुलित hoverboard K5 UL2272 र ASTM दोहरी ब्लुटुथ र एलईडी रोशनी संग प्रमाणपत्रहरू। यो पनि बीचमा एक ह्यान्डल छ, ल्याउन धेरै सजिलो। प्रविधिलाई मा, मड्यूलर संरचना, धेरै कम केबल, थप सुरक्षित, धेरै कम दोषपूर्ण दर (3 प्रति हजार) र थप स्थिर। यो आत्म-सन्तुलित hoverboard रूपमा लामो आफ्नो बिजुली ब्याट्री जाँदै राख्छ रूपमा सहरमा जहाँ जान सक्छ जो यातायातका एक अद्वितीय रुप हो। काम, संकाय वा anyplace अरू जस्तै प्रत्येक दिन कार्यहरू द्वारा जा हात-मुक्त बाइक सही एक Placid र पूरा संलग्नता परिणत गर्न सक्नुहुन्छ।
Koowheel हाल को शुरू तह बिजुली स्कूटर अभिनव सुशील सुन्दर डिजाइन जो विकासकर्ताहरूले धेरै राम्रो नवीन गर्न अनुमति दिन्छ प्याटेन्ट संग। यसको एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन सम्पूर्ण ब्याट्री र गति देखाउँछ। प्रकाश तर ऊर्जावान।
साधारण बोल, सेग्वे hoverboard प्राविधिक प्रगति र अवकाश मा महिमित आवश्यकताहरु सेट छ। अन्ततः यो रिपोर्ट सेग्वे एक व्यापक बजार को लागि धेरै गतिशीलता आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्छ भन्ने प्रसिद्ध यातायात विभिन्न प्रकारका स्थानान्तरण सुविधा सक्छ, र वाहन एक विकल्प रूपमा सेवा गर्छन्।
पोस्ट समय: अगस्ट-23-2017